Hunt Showdown Hacks ats Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Zingela izilo futhi ukhiphe izitha ngaphandle kokuziqagela wena! I-GamePron inayo yonke i-Hunt: i-Showdown ESP, i-Aimbot, iWallhack, nanoma ikuphi okunye ukukopela okuzodinga.
I-JUMP TO HACKS
Usuvele uthenge iHunt: Hack Showdown? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Hunt ethu: i-Showdown hacks, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma lisaxhumekile ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Hunt: Showdown Hacks
Ama-Squad Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
I-Gamepron ayiyivuseleli imikhiqizo ngokuzenzekelayo. Le yinkokhelo yesikhathi esisodwa. I-Gamepron ivuselela ubulungu be-VIP kuphela, ungakhansela nganoma yisiphi isikhathi.
I-Gamepron ayigcini imininingwane yekhadi lesikweletu. Bacutshungulwa ngabaprosesa bethu bokukhokha.
Thenga Hunt: Showdown Hacks in 4 izinyathelo
Hunt: Showdown Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks nokuningi
Khetha uHunt: Ukubukisa kusuka ekukhetheni okubanzi kwemidlalo etholakala lapha eGamePron
Khetha i-hack evumelana nesidingo sakho
Kunezici / ama-hacks amaningi ongakhetha kuwo, ngakho-ke khetha konke ocabanga ukuthi kuzokusiza kakhulu!
Khokha usebenzisa izindlela zethu zokukhokha eziphephile
Sithatha izinkokhelo sisebenzisa iprosesa yokukhokha ephephile engu-100% (futhi ekhethekile ku-GamePron) yokuphepha kwamakhasimende
Finyelela kukhiye wakho bese ulanda ukukopela
Ngemuva kokuthenga, ungasebenzisa ukhiye wakho womkhiqizo ukufinyelela nokulanda i-Hunt yethu: Showdown Intel hack!
Kungani i-WTW Hunt: Showdown Intel hacks?
Ukugenca ngokujwayelekile kuzobonakala njengenqubo ethusayo, ikakhulukazi uma ungakaze udlule kukho ngaphambilini. Sifuna ukwenza abaqalayo bazizwe sengathi bangenza noma yini lapha eGamePron, futhi iHunt yethu: Showdown Intel Hack ayihlukile. Abanye onjiniyela abaningi be-hack bazama ukuthola ukuthi bangalisebenzisa kanjani inqwaba yezici ezingenamsebenzi kumathuluzi abo, kepha sigxile kuphela kwimiphumela. Ukuzingela: Ukubukisa phansi ngumdlalo odingayo maqondana nezinga lekhono lakho, njengoba ungeke nje ulwe nezilo, kepha kuzofanele ukhathazeke ngamanye amaqembu futhi!
Inhloso enkulu yalo mdlalo ukulayisha amamephu ahlukahlukene futhi ukhiphe "isilo somphathi" esihlala ngaphakathi. Ezinye zalezi zilo ziyesabeka impela, njengoba uzobe ulwa nokuthandwa kwesicabucabu esikhulu noma umthakathi onamandla! Uzokhulisa izikhali zakho nezinhlamvu njengoba uqhubeka nomdlalo, ukukunikeza umthwalo omkhulu onamandla wokusebenza lapho konke sekushiwo futhi kwenziwa. Le yinqubo ethatha izinyanga eziningi zabadlali ukuyizuza, kepha uzokwazi ukuqhuma ezinhlwini ngokusebenzisa iHunt yethu: Showdown Intel Hack!
Ukunemba kuzocacisa ukuthi ngubani ophumelele ezimpini eziningi, futhi yingakho ukusebenzisa iHunt yethu: IShowdown Aimbot kuhlale kukuzuzisa kakhulu. Abadlali bazovuna izibhamu ezithile kunabanye, ngoba bonke banikeza izibalo ezihlukile futhi "bazizwa" lapho kufika isikhathi sokulwa. Lapho ungahlala ubuyela emuva ekuzingeleni: I-Showdown Aimbot etholakala lapha eGamePron, ayikho indlela ozozithola ngayo ekugcineni kwempi.
Ngaphezu kwakho konke okunye, ikhwalithi lizohlala liza kuqala kakhulu kunoma yikuphi ukukhishwa okutholakala ku-GamePron. Noma ngabe umdlalo musha sha noma kuba yisihloko esidala, ungalindela ukuthola umkhiqizo onokwethenjelwa nothembekile njalo.
Asikho isidingo sokunikeza onjiniyela bama-hack inzuzo yokungabaza, njengoba ungavele ubeke ukholo lwakho kwinsizakalo enedumela njengakwethu. Uma ufuna indlela engabizi kakhulu yokuzenza unkulunkulu wokudlala, i-GamePron inawo wonke amathuluzi adingekayo ukwenza kanjalo. Ungamoshi imali yakho kokunye ukuzingela: ama-Howdown Showdown azokushiya ufuna okuningi! Thola ukufinyelela ekuzingeleni kwethu: Showdown Intel Hack namuhla futhi ubone ukuthi kungani abasebenzisi abaningi kangaka bethandana.
Ukuzingela: Showdown Wall Hack (ESP)
Ukuzingela: Imininingwane Yabadlali Ngomdlalo ESP (Igama, Amabha Wezempilo, ibanga)
Hunt: Showdown Into ESP ngezihlungi
Ukuzingela: Showdown Aimbot
Ukuzingela: Izexwayiso zezitha zesixwayiso
Ukuzingela: Showdown super jump mode (akukho monakalo wokuwa lapho ucushwa).
Ukuzingela: Ukwehliswa kwethambo & ukhiye we-aim okulungisekayo.
Hunt: Showdown Buyisela isinxephezelo
Our Hunt: Showdown Hack Izici
Ukuzingela: Showdown Intel Player ESP
Sebenzisa iHunt yethu: Showdown Intel Player ESP ukukhomba izitha nabalingani beqembu kusuka noma yikuphi kumephu! Ungabona cishe noma yini oyifunayo ngokusebenzisa izindawo eziqinile ngalesi sici.
Ukuzingela: Showdown Intel Player imininingwane ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Ngeke nje ukwazi ukubona imodeli yangempela yomdlali ngezindawo eziqinile, kepha ungabona imininingwane eminingi mayelana nalokho okukhonjiwe (njengamagama, ezempilo, ngisho namabanga!).
Ukuzingela: Showdown Intel Into ESP ngezihlungi
Izihlungi zenza umhlaba ube indawo elula kakhulu, futhi ungazulazula embusweni we-ESP ngaphandle kokuhlupheka usebenzisa i-Item ESP yethu ngomsebenzi wokuhlunga. Thola izinto ezinhle ngokushesha!
Ukuzingela: Showdown Intel Aimbot
Noma ngubani owake wadlala isibhamu esikhathini esedlule uyazi ukuthi bathambekele ekuklonyeliseni abadlali abanekhono kakhulu lapho kungenzeka, futhi i-Aimbot yethu ibavumela ukuthi bathwale amaqembu.
Ukuzingela: Showdown Intel Bullet track (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
I-Bullet Track ilungele uma ubheka ukubona ukuthi isibhamu sihlala kuphi, okuvumela abasebenzisi ukuthi baqinisekise ukuthi kubulala ngokushesha okukhulu.
Hunt: Showdown Intel bone & aim ukhiye okulungisekayo
Akudingeki nje ukuthi ufafaze futhi uthandaze! Khomba izindawo ezithile zezitha zakho usebenzisa i-Hunt: Showdown Aimbot ene-Bone Prioritization.
Hunt: Showdown Intel aimbot amasheke abonakalayo
Usebenzisa iHunt yethu: Ukubukisa phakathi kwe-Intel nge-Aimbot Visible Checks kuzokuvimbela ekwenzeni noma yikuphi "ukunyakaza okungathandeki" ngenkathi ukopela.
Ukuzingela: Isibonisi sokukhokha se-Intel Recoil
Ukubuyisa udaba olusobala, ngoba luzoba nomthelela omubi ekunembeni kwakho. Ungasebenzisa i-Recoil Compensator yethu ukuyisusa kumdlalo wakho!
Hunt: Showdown Intel isexwayiso sesitha
Uma isitha sisesimweni sokukuthoba, umlayezo oyisixwayiso uzovela esikrinini sakho (ukuthi ungazenza ngokwakho, by the way!).
Ukuzingela: Showdown Intel super jump mode (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Imodi ye-Super Jump izovumela abasebenzisi ukuthi bahlale emdlalweni, noma ngabe bekungafanele! Susa noma yikuphi ukonakala kokuwa ongakuthatha ngalesi sici esihle.
I-block of text ekhuluma ngokuthi ama-hacks ethu azokusiza kanjani ukuthi ube ngumpetha emdlalweni
Labo abagulayo nabakhathele ukuba yisikhwama sokubhoboza abanye abadlali ekugcineni bathole indawo efanele, njengoba leli thuluzi lizoshintsha indlela odlala ngayo iHunt: Showdown ngokuphelele. Akudingeki nokuthi ube nezikhali ezinamandla kakhulu ukuthola impumelelo ngaleli thuluzi elinikwe amandla, njengoba uzokwazi ukukhipha izitha nganoma yini onayo (siyakuqinisekisa!).
Ilungele Yengamela Yonke imidlalo?
"I-Gamepron inikeza ukukopela okungatholakali okungu-100%, okuyikho konke engikufunayo."
"Noma ngabe i-Aimbot noma iWall Hack / ESP, iGamepron izoba nokuthile okufunayo."
Ukuzingela Okudumile: Showdown Intel Hacks and Cheats
Ukuzingela: Showdown Intel ESP neWallhack
Unyawo, Ukulimala Okuphezulu nokuHamba kweBanga
Okunye Ukuzingela: Showdown Intel Hacks and Cheats
Ukuzingela okuthandwa kakhulu: Ama-Howdown Shacks nama-Cheats asobala kulabo abake bawasebenzisa esikhathini esedlule, kepha uma umusha sha emqondweni wokukopela, ungathembela ku-GamePron ukukugcina uphephile. Izici ezidume kakhulu ezitholakala ekukopeleni kwakho okujwayelekile kuzoba yi-Aimbot, iWallhack, i-ESP, nezinye ezimbalwa ezenzeka ukuthi zifakwe phakathi kwalolu khetho. Lapho kunama-lobbies agcwele ukujuluka, kufanele ulwe nayo nganoma iyiphi indlela ongakwenza ngayo!
Usebenzisa i-Hunt yethu: Khombisa i-Intel Hack kuzokuvumela ukuthi uchume ngezindlela ezingaphezu kweyodwa, ngoba awuzukuvele ulande ukugqekeza okuqondile. Ungasebenzisa leli thuluzi ukuthola izindawo zezitha, ukubonisa imilayezo yokuxwayisa, noma vele ukhiphe umncintiswano ngaphandle kwanoma yiliphi ithuba lokuziphindiselela. Noma isiphi isici ongathemba ukusithola kuHunt: I-Showdown Hack kungenzeka itholakale ngaphakathi, ngakho-ke kungani ulinda? Thola ukufinyelela ku-Hunt: Showdown Intel Hack namuhla bese uvumela izitha zakho zazi ukuthi ubani umphathi.
Sebenzisa i-Aimbot kunesidingo ngandlela thile uma kukhulunywa ngokugenca, njengoba ungenayo, umane ukhawulela amandla akho okukopela. Labo abakhohlisayo ngaphandle kwe-Aimbot efanele bamane baphuthelwa amathuba okwenza imali, okuyinto esizama ukuyigwema uma kungenzeka lapha eGamePron. Sifuna abasebenzisi bethu basebenzise konke abakwaziyo ngeHunt: Showdown Intel Hack kanye neqiniso lokuthi i-Aimbot efakwe ngaphakathi kumkhakha-ojwayelekile kufanele ikwenze kucace lokho!
Sinikeza bonke abasebenzisi bethu ukufinyelela ku-# 1 Hunt: Showdown Aimbot etholakala ku-inthanethi, futhi senza kanjalo ngaphandle kwemingcele. Kubandakanya izinketho eziningi ezilungisekayo, ezinjenge-FOV Circle eguquguqukayo kanye ne-Smooth Aiming yokuvikela ukunyakaza okungahambi kahle. Ungasebenzisa i-Bone Selector ukukhomba izindawo ezithile zesitha, futhi zisebenzela bonke abalingiswa nama-NPC! Ifaka i-Hardware Emulated Mouse Aimbot, okusho ukuthi ingenye yezindlela eziphephe kakhulu zokukhohlisa.
I-ESP imele i-Extra Sensory Perception, futhi kufana nokungeza umqondo owengeziwe kugeyimu yakho. Ngeke uhlale uzwa izitha ngaphambi kokuthi zisondele ngokwanele ukuthi zihlasele, futhi leyo inkinga enkulu emidlalweni edinga ukusebenzisana. Uma umuntu oyedwa ekhishwa ngokunyenya, konke ukusebenza kudutshulwa! Usebenzisa i-ESP yethu neWallhack uhlala wazi ngezindawo zezitha, kanye nabalingani beqembu. Ungathola ngisho nezinto eziwusizo usebenzisa i-Item ESP ngomsebenzi wokuHlunga, kepha lokho kusisiqalo nje.
Thola ukuhlangana kwanoma ngubani ngokubheka i-Enemy Info ESP (ekhombisa amagama abo, isheke lokufa, amabanga, noma isimo sokuhlangana). Noma ngabe yizilo noma ngabantu, akunandaba! Wonke amadimoni wamanzi, ama-Meatheads, ama-Spider, nama-Immolators awasakwazi ukufihla emandleni akho.
Izicupho nezinye izinto ezingalimaza uhlamvu lwakho kungabonakala kusetshenziswa umsebenzi we-Item ESP futhi, ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka ngokunyathela izingibe zebhere lapho amandla ethu evunyelwe.
I-footprint isici esimangazayo esizovumela abasebenzisi bethu be-GamePron ukuba bacuphe izitha zabo sengathi ngamakati amakhulu ehlathini! Ungahlasela abaphikisi bakho futhi ubazise ukuthi ngubani inkosi yale seva enesici seFootprint, futhi ilusizo ikakhulukazi kumdlalo ofana noHunt: Showdown. Kunezikhathi lapho ukuphishekela iqembu buthule kuzokukhokhela, ngoba kungakwenza buthakathaka umphathi wakho ngaphambi kokuthi ubakhiphe (kanye nomphathi)! Kumnqobi uya kuyo yonke impango, yingakho kubalulekile futhi ukukhumbula iHack Damage Hack.
Ukulimala Okuphezulu kuzokuvumela ukuthi uhlasele ngamandla amaningi kunanoma ngubani omunye umuntu, kukunikeze inzuzo cishe kuzo zonke izimpi ezilodwa. Ungavumela isici seBanga futhi ubone ukuthi usondele kangakanani kulitshe lakho, ngaphambi kokusebenzisa Ukulimala Okuphezulu ukuziqeda ngaphandle kokukhathazeka. Kungani uzihlupha ngokunikeza izimbangi zakho ithuba lokuzilwela?
Ukuzingela okulungile: Ukugenca kwe-Showdown ngeke kube ukukhetha okucacile ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokuthi uthenga nge-GamePron! Sinezici zonke ezithandwa kakhulu ezifakiwe kule Hunt: Showdown hack, kepha lokho kuyisiqalo nje. Asigcinanga ngokubhekela izidingo ezidume kakhulu eziceliwe kwezethu
Hunt: Showdown Hacks, kepha sifake ezinye izinto eziningi ezingeziwe ezingatholakali kumathuluzi alolu hlobo. Abanye onjiniyela bazomane bashaye iWallhack ne-Aimbot ndawonye bese bekhipha umkhiqizo, kepha besifuna ukudlula lokho nangaphezulu kwalokho.
Isici Sesixwayiso singasetshenziswa ukubonisa umyalezo owenziwe waba ngewakho esikrinini sakho noma kunini lapho isitha siseduze, sikuvumela ukuthi uqoqe amabhere akho futhi ubhekane nesimo kahle. Umdlalo ungadlalwa kusikrini esigcwele ngalokhu kukopela kunikwe amandla, futhi ungasebenzisa i-HWID Spoofer eza eceleni kweHunt: Showdown Intel ukugwema ukuvinjelwa kwangaphambilini. Kuzofanele ukhubaze ukuvikelwa ukuze uqinisekise ukuthi i-hack ayihlatshwanga ngamanga, ngoba ngeke isebenze kahle ngenye indlela.
Ukuzingela: Hacks Shownown Imibuzo
Kungani uHunt wethu: Showdown Intel Hacks
Sigxila kwikhwalithi ngakho konke ukukhishwa, futhi lokho kuyisiqinisekiso. I-GamePron ibilokhu ixhuma abasebenzisi ngama-hacks athembeke kakhulu kuyo yonke imidlalo abayithandayo selokhu savula, yingakho abasebenzisi baqhubeka nokusethemba. Ukuthola umthombo onokwethenjelwa ongahlala uye kuwo ukuthola ama-hacks wakho kubalulekile! Ngaphandle kwamathuluzi athembekile, empeleni ugenca ngokungaboni.
Kungani uHunt wethu: Showdown Intel Aimbot
Ama-Aimbots awadaliwe ngokulinganayo, sazi okuningi. Akukona nje kuphela ukuthi thina ngokwethu singakuqinisekisa ukuthi lokhu kungukuzingela okuhle kakhulu: i-Showdown Aimbot online, kepha nabasebenzisi bethu bazosisekela leso sitatimende. Uma ufuna ukugenca kodwa ugcine ukubukeka kwemvelo, usebenzisa iHunt yethu: Showdown Intel Aimbot ngokusobala inketho onayo onayo.
Kungani uHunt wethu: Showdown Intel ESP
Ngokukhohlisa okulungile kwe-ESP, akukho mphefumulo kule planethi ozokwehla kuwe. Ukudutshulwa ngemuva kufanele kube ngenye yezinto ezithukuthelisa kakhulu ezihambisana nanoma yimuphi umdubuli, kanti uHunt: I-Showdown ayihlukile! Gwema ukuphoxeka ngesici sethu se-ESP.
Kungani ukuzingela kwethu: Showdown Intel Wallhack
Ama-Wallhacks afana namathuluzi we-ESP, ngomqondo wokuthi uzohlala ubona ukuthi izitha zitholakala kuphi nazo. Uma ungakwazi ukuthola ukuthi kungani ukubona iqembu eliphikisayo ngezindonga kuyinzuzo enkulu, ungahle uthande ukuhlola ikhanda lakho! Ngeke nje ukwazi ukusetha ngaphandle komthungo i-ambush, kepha ungaze “udonga bang” abantu abambalwa kule nqubo.
Kungani uHunt wethu: Showdown Intel Norecoil
Ukurekhodwa ngeke kumenywe kunoma yimaphi amaphathi ezinsuku zokuzalwa, kepha lokho kulungile! Akudingeki ukuthi uhlupheke ngolaka lwezibhamu, ngoba ungavele unike amandla umsebenzi wethu weNoRecoil futhi wehlise noma ngubani onesibindi sokuma endleleni yakho. Kuhle futhi ukuhlala ucashile ngenkathi ukopela ngoba akukho nqubo yokuhlose ezenzakalelayo eyenzekayo.
Ungayilanda kanjani i-Hunt engcono kakhulu: ama-Hacks Showdown Intel?
Kumele umane uthenge ukhiye womkhiqizo ku-GamePron bese ulungele ukuhamba! Senze inqubo yokulanda ama-cheats ethu yaqonda ngqo ukuze abaqalayo bakwazi ukuyidlula ngaphandle kwamaqhubu emgwaqeni. Akunangxenye yokungena ngaphakathi kwenqubo noma, ngoba akudingeki ukuthi ufake noma yini ngokwakho kumafolda uwedwa.
Kungani iHunt yakho: I-Showdown Intel hacks ibiza kakhulu kunabanye
Yize kungabiza uma kuqhathaniswa nezinye izindlela ezisezingeni eliphansi nezishibhile laphaya, sikhona okungabizi kakhulu uma kuqhathaniswa nezinsizakalo zokugenca ze- “premium”. Hhayi lokho kuphela, kepha konke ukukopela kwethu kuphephe ngo-100% futhi kunganikezwa kuphela kwinani elilinganiselwe labasebenzisi ngasikhathi sinye. Njengomphumela, kudingeke ukuthi silungise amanani ngokufanele.
Unamiphi imingcele yesikhathi?
Kunemikhawulo yesikhathi ezokwanela izidingo zanoma ngubani, ngoba asikholelwa ekukhiyeni amakhasimende ethu esivumelwaneni angafuni ukuba yingxenye yaso. Ungakhetha ukuthenga ukhiye womkhiqizo ozokunikeza ukufinyelela ku-Hunt yethu: Showdown Intel Hack yosuku olungu-1, isonto eli-1, noma inyanga eyodwa. Uthola ukuthi uzonikezwa isikhathi esingakanani ukufinyelela ku-Hunt: Showdown Intel Hack, ngokungafani ne-GamePron ekunqumele yona.
Awesome Hunt: Showdown Hack Izici
Joyina i-Hack Revolution manje
I-Fortnite Hack nge-EzWin